12 Major Maitiro Ekubiridzira Kudzivirira Pasi Pose | Save A Train
musha > Travel Tips > 12 Major Maitiro Ekubiridzira Kudzivirira Pasi Pose
Nyika inzvimbo yakanaka, asi vafambi-venguva yekutanga vanogona kuwira mumiteyo yekushanya uye vova vanyajambwa vezvifambi zvekufambisa. Ndivo 12 mikuru yekufambisa yekunyepedzera kudzivirira pasirese; kubva kuEurope kuenda kuChina, uye chero kumwe kunhu.
1. Kufamba Scams Kudzivirira Pasi Pose: Kuwedzererwa Kwetaxi - Kutsauka
Motokari huru, mutyairi wetekisi achikuudza nyaya dzeguta, uye maonero matsva kubva pahwindo anoita kuti zvive nyore kwazvo kuwira mutekisi yekuwedzeredza yekufamba chitsotsi.
Kutenderera netekisi zvinoita senge yakasarudzika nzira yekufamba sevashanyi, asi inogona kuve imwe yeakanyanya kubiridzira ekufamba pasirese. Semushanyi hauzoziva iyo inokurumidza uye yakanakisa nzira kubva kuairport kuenda kuhotera, kana kubva pane chimwe chinokwezva kuenda kune chimwe, saka vatyairi vematekisi vanogona kupemberera panzvimbo yako uye kukumbira mwero unotyisa kana kukuendesa pane yakakura nzira, zverwendo rwusingafanire kupfuura 15 ini.
Maitiro Ekudzivirira Iyo Taxi Kuwedzeredza?
Tsvagirisa pamberi peiyo tekisi inogamuchirwa mune yako navi rwendo. Mukuwedzera, ita shuwa kuti une yakakura mepu app, izvo hazvidi Wi-Fi, saka unogona kutarisa nzira nguva dzose, uye Chikurukuru, sarudza yakavimbika tekesi kambani, kana kufamba nechitima.
2. Iko Kudurura Pane Hembe Dzako - Njiva Trick
Kana iwe uri kuronga kuenda kuArgentina, semuyenzaniso, iwe unofanirwa kuziva nezve iyo njiva inodururwa pane yako nguo yekufamba chitsotsi. Rudzi urwu rwekufamba chitsotsi rwakakurumbira kwazvo muBuenos Aires, panouya nzvimbo ine hushamwari inosvika kwauri, kuda kubatsira sezvo pane chadeuka pese pahembe dzako.
Fungidzira iwe urikuyemura pakati peguta kana uine zuva rakanaka mupaki, ndichicheuka, uye kamwe kamwe mutorwa ane ushamwari anouya kwauri, kukuzivisa iwe kuti pane kuraswa kwese pahembe dzako. Unoisa saga pasi, tarisa tarisa uchishamisika nekudeuka uku, uye panguva iyi pasipoti, chikwama, uye zvinhu zvako zvose zvinokosha zvaenda.
Maitiro Ekudzivisa Iyo Kudururwa Pane Hembe Kufamba Scam?
Ongorora senge yemuno, ziva zvakakukomberedza, uye edza kuisa maziso ako mberi.
3. Kufamba Scams Kudzivirira Pasi Pose: ATM Kufamba Scam
Mari inoita kuti nyika itenderere, saka zviri pachena kuti imwe yeakanyanya kubiridzira ekufamba munyika inosanganisira mari. Imwe yeakanyanya kubiridzira mafambiro pasirese ndeyekunyepedzera kweATM apo muverengi wekadhi rechikwereti anobvisirwa anoteedzera zvako magwaro uye ozoashandisa kubvisa mari yako yese.
Maitiro Ekudzivirira Iyo ATM Scam?
Kana zvichinyatso kudikanwa, tora mari kubva kubhanga guru rinozivikanwa reATM. mu mabhanga makuru muEurope, pane kuchengeteka, saka mikana yekuve nekuwana maATM kadhi kuverenga inosvika zero.
4. Bump Uye Kubata
Imwe yemhando dzekufamba dzekubiridzira munyika, iyo bundu uye kubata zvinozivikanwa pane zvifambiso, uye muzviratidzo. Iwe unogona kunge uri muchitima, metro, kana kumirira pachivara chePrague wachi yakakurumbira apo kamwe kamwe mumwe munhu netsaona anorovera mauri.
Kunyange inogona kunge iri tsaona, ingangove iri yakarongwa kunhonga bump-in. Inogona kuve kupatsanurwa kwesekondi, munhu “ndine hurombo”, uye chikwama chako, tarisai, kana zvishongo zvapera. Iyo bump uye inobata chitsotsi ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvinhu kuziva kuti riini vaifamba mu Europe.
Maitiro Ekudzivirira Iyo Bump Uye Kubata?
Siya zvinhu zvinokosha mukamuri yehotera, uye nekuparadzira zvese zvauri kutora kuenda nazvo: chikwama muhomwe yemukati yebhachi semuenzaniso.
5. Kufamba Scams Kudzivirira Pasi Pose: Boka
Zvakafanana nebump uye inobata, chitsotsi ichocho, ndipo paunongoerekana wazara neboka revasingazive, zvakanaka izvo zvinotaridzika kuva vatorwa kwauri. Saizvozvo, vatorwa ava vanozivana zvakanaka, uye nerunako akaronga kusangana kunoshamisa, kana kuwanda. Nenzira iyi inotaridzika kunge isina mhosva zvachose, apo iwe wakakomberedzwa uye unonhonga.
Izvi zvinowanzoitika munzvimbo yakazara vanhu, uko boka iri rinosangana nevanhu vazhinji nemheremhere. Vanotanga kufamba-famba vachikukomberedza uye vobva vakutsausa sezvo vamwe vanobata bata zvese. Kuchengeta mari yako munzvimbo imwechete imwe yeiyo 10 zvikanganiso zvekufamba iwe zvaunofanirwa kudzivirira muEurope.
Maitiro Ekudzivirira Iyo Swarm Scam?
Ingo gara kure nemapoka, uye zipi jasi rako, kana chengeta zvinhu zvako, zvirinani, isa chero bhegi pamberi pako.
6. Shamwari Yemunharaunda
Iye mushanyi akanaka uye ane hushamwari inozivikanwa yekufamba chitsotsi pasirese. Kunyangwe iwe uri kufamba muRed Square kana kuParis, pachagara paine hushamwari hwemunharaunda vachipa rubatsiro rwavo kuti vasvike kuEiffel Tower kana kukuratidza nguva yakanaka kutenderera guta.
Uyezve, ivo vanozove vanobatsira kwazvo pakuratidzira ese makirabhu makuru akatenderedza, kuti iwe uchango nyengedza mangwanani anotevera, kumuka, uye kucherechedza mari yako yaenda zvese. saka, rwendo rwega semuenzaniso, pasi rese inogona kuve mukana unoshamisa wekusangana nevanhu veko, asi inogona zvakare kuita yako yakaipa kwazvo kurota.
Maitiro Ekudzivirira Iyo Yehukama Yemunharaunda Kufamba Scam?
Kusangana nevanhu veko pakufamba kwako kwakanaka, uye chimwe chezviitiko zvakanakisa. zvisinei, chenjera waunovimba naye, uye kupedza husiku na. Chiitiko mune imwe nyika isingazivikanwe chinogona kukurumidza kuchinja kuita njodzi, saka chenjera.
7. Kufamba Scams Kudzivirira Pasi Pose: Bracelet Scam
Free zviyeuchidzo zvinobva kune imwe nyika kurira kunoshamisa, asi hapana chaizvo zvakasununguka zvinhu munyika yatiri kugara. saka, usadonhedza zvemahara bracelet scam izvo zvinowanzo sanganisira mukadzi wemuno achiuya kwauri achinyemwerera, kuisa rundarira paruoko rwako.
Kunyemwerera uye zvine hushamwari, ivo vachakupa chaicho maringi kana chishongo chekutora kumba, nepo nguva dzese ruoko rwavo rwuri kusvika pachikwama chako, uye zvishongo. Kupa chimwe chinhu chakanaka uye chemahara chinhu chikuru chinokanganisa uye chinoshanda kune vazhinji vasina mhaka vashanyi.
Maitiro Ekudzivirira Iyo Yeye Bracelet Scam?
Usadonhedze zvemahara souvenirs, uye ingo chengeta maziso ako akavhurika, uye nemutsa ramba kugamuchira chero kupi zvako kwemahara kunobva kune vausingazive.
8. Mwana Anokumbira
Akapfeka nhamo, tsvina, kukumbira mari kana chikafu, mwana anokumbira ndeimwe yeanoshungurudza ekufamba chitsotsi munyika. Kubva kuEurope kuenda kuChina, kune vana vakamira parutivi penzira, kuimba dhora munzvimbo dziri pakati, kana kubata pahwindo retaxi.
Kazhinji kazhinji vana ava havana kurasika sezvavanotarisa, asi vakatumwa kunotora chinzvimbo. Zviri pachena, kune vana vanonyatsoda chikafu nerubatsiro.
Maitiro Ekudzivirira Anenge Achikumbira Mwana Scam?
Izvi zvinonetsa nekuti nyika izere nevana varombo vasina imwe sarudzo kunze kwekukumbira. zvisinei, unogona kuvapa kuvatengera chikafu kana rubatsiro neimwe nzira, pane kupa mari. Nenzira iyi, unogona kutarisa maitiro avo, uye kana vari kunyatso kushaiwa kana kungoita chikwama chevashanyi.
9. Kufamba Scams Kudzivirira Pasi Pose: Kukwezva Kwavharwa
Wakatarisa maawa ekuvhura pamberi, asi iwe unoshamisika paunosvika patembere kana kushopu weko anokuudza kuti yakavharwa. ndokubva, pavachaona kunyadziswa kwako, ivo vanopa kukuendesa iwe kune imwe inonakidza landmark kana shopu, kunyangwe zvirinani pane yakavharwa.
Vemunharaunda vanogona kupa zvinoshamisa kushama, asi ivo vari kutobvambura iwe, nekubvunza mari yekupinda yakadhura, kana kuenda newe kunotenga kwavanowana mafuta Commission.
Maitiro Ekudzivirira Aya Ekufamba Scam?
Kushanyira nzvimbo dzisiri-dzakarohwa-nzira zvinoshamisa, ingova nechokwadi chekutarisa zvakatenderedza uye kana paine dzimwe nzira. Pamusoro pe, tsvaga pamberi pezvakanakisa zvekushanyira muEurope. Kana kukwezva kuri mahara, saka hapana chikonzero chekuitsiva neyakawedzera mutengo, uye zvakafanana kune zvitoro zvine wongororo huru.
10. Rega Nditore Mufananidzo Wako
Kufamba woga kunogona kuve kunoshamisa, uye pane dzimwe nguva uzere nekuzvidemba hapana mumwe newe wekuita yakakwana yemagariro midhiya mufananidzo. Big Ben kana Firenze kumashure, iwe unotarisa-tarisa uye vobva vauya kwauri vachipa kutora mufananidzo unoshamisa, kubva pakona huru.
2 masekondi gare gare kamera yako uye ese makuru mifananidzo aenda, nekuti mweni akanaka akamhanya navo. Izvi zvinogona kuitika chero kupi zvako pasi, kunaani zvake, nekuti ndezvipi zvipingamupinyi izvi zvichaitika? asi zvinodaro.
Tarisa vamwe vashanyi, pamwe vafambi vega futi, kana vaviri. Iyi ndiyo nzira yakachengeteka yekutora mufananidzo wakanaka uye chengetedza kamera, uye mukutsinhana, kumbira kutora mufananidzo wavo.
11. Kufamba Scams Kudzivirira Pasi Pose: Switcheroo
Nzira yakanakisa yekubata mari kana uchifamba ndeyekuti uve nemabhiri madiki newe nguva dzese. zvimwe, chenjera nemari hombe, kana uchibhadhara vatyairi vematekisi kana mumaresitorendi emuno. Iwe unogona kunge uchipa hombe hombe yemubhadharo mudiki, asi ivo vanogamuchira vanozoita sevanodonhedza chikwereti chikuru vochichinjira s s shoma kwazvo bhiri. Nenzira iyi, vanopfupisa vashanyi.
Vatengi, vatyairi vematekisi, kana hweta, vanogona kuve vatambi mune ino switcheroo scam. Iwe unenge uri muhombe muhombe pano, kana ukasangwarira.
Maitiro Ekudzivirira Iyo Switcheroo Scam?
Taura huwandu hwebhiri rauri kupa, uye uzive shanduko iwe yaunofanirwa kunge uri kugamuchira kumashure.
12. Major Maitiro Ekubiridzira Kudzivirira Pasi Pose: Vachida Vadzidzi veChirungu
Ivo vanotaura yakaputsika Chirungu asi vari kukumbira iwe kuti uvadzidzise. Vadzidzi veChirungu vanoshingairira vanohwandira mumakamuri nemumabhawa, ichatanga hurukuro ine hushamwari newe, uye ndokukumbira iwe wega chidzidzo cheChirungu muhotera yako kamuri.
Kamwe muhotera, mudzidzi wechirungu anodisa anogona kushanduka kuita husiku, uye unomuka kune chikwama chakabiwa uye pasipoti. Ichokwadi ndechekuti hazvigoneke kuvandudza hunyanzvi hwemutauro nehusiku, uye kunyange mumwe munhu anoda kudzidzira Chirungu chavo, ichi chidzidzo hachifanirwe kuitika mukamuri yehotera kana kupfuura doro.
In mhedziso, kungwara kufamba ndiyo nzira yakanakisa yekufamba mazuva ano, pese pese pasirese. Chikonzero ndechekuti kubiridzira kwekufamba kunowedzera kuoma kuratidza. Izvo zviri kutaurwa, hazvina kumbove zviri nyore kufamba kutenderera pasirese kupfuura nhasi.
pano pa Save A Train, tichave tichifara kukubatsira kuronga nzvimbo dzako dzeKunakidzwa Kuti Ushanyire uye kupedzisa rwendo rwako uchifara nekudzivirira Kufamba Kwezvitsotsi.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "12 Makuru Ekufamba Scams Kuti Udzivise Pasi Pose" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
comontravelscamsineurope MajorTravelScamsToAvoidWorldwide Scam TouristicTraps TravelScams traveltips
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Travel Europe